OMG Digital Evidence Management Software [ODEMS] (BWC045) | Ngwọta OMG
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla nwere ike ijide akụkọ akụkọ dịka mmekọrịta dị njọ n'etiti onye uweojii na onye otu ọha na eze. Ruo ọtụtụ afọ, ihe si na ndị uweojii eme ihe abanyewo na "ọ sịrị, ọ sịrị" arụmụka. N'ịbụ ndị e mepụtara nke dị elu, kamera vidio ndị dị ntakịrị, Otú ọ dị, ngalaba ndị uweojii nwere ugbu a iji dozie esemokwu ndị a. Ọbụna nke ka mma, ha nwere ike igbochi ha ime na mbụ.
Obodo di iche iche gburugburu obodo na acho ka ndi uweojii ha na-eyi kamera ndi mmadu, n'ihi ezi ihe kpatara ya. N'iji igwe eserese na ndekọ nke mmekọrịta onye uweojii, ngalaba ndị uweojii na ọha na eze na-eje ozi pụrụ ịchọpụta kpọmkwem ihe merenụ n'ihe ọ bụla mere.
Mgbe ndị uweojii na-ahụ maka uwe ndị a, ọnụ ọgụgụ nke mkpesa ọha na eze na-adaba n'ụzọ dị ịrịba ama, dị ka ọnụ ọgụgụ nke ndị uweojii chọrọ iji ike. Nanị ha na-emepụta nkọwa dị mkpa maka ndị niile so na-aghọta na ihe niile ha na-eme bụ nke e dekọrọ maka ụmụ.
OMG Digital Providence Management Software [ODEMS]
Ngalaba ọ bụla nwere ụzọ nke ya si eme ihe, na teknụzụ ọhụrụ ekwesịghị ịmanye gị ịrụ ọrụ n'ụzọ ụfọdụ. Ma ọ bụ otú ịchọrọ ịnweta vidiyo, chekwaa data ma ọ bụ jikwaa nkọwa niile nke otu esi eji ya.
Iji mee ka igwe foto ndị a bụrụ ihe bara uru, ha ga-arụ ọrụ site na ikikere nyochaa njikwa ihe ngosi, nke a makwaara dị ka DEMS. A na-eji akụrụngwa a n'ọtụtụ ụzọ iji hụ na a na-edekọ ihe ndekọ akụrụngwa niile ma chekwaa nke ọma. E nwere ọtụtụ isi ihe data ga-edezi. Dịka ọmụmaatụ, software anyị nwere ike:
- Sochie onye uweojii dere ihe vidio na n'oge ọdere ya
- Nọgide na-enwe metadata maka ndekọ ọ bụla, dị ka nke ndị òtù ngalaba lere ya na mgbe
- Na-enye gị ohere akara vidio dị ka ihe akaebe na nchọpụta na-aga n'ihu ma ọ bụ n'ihi maka nchekwa dị mfe
- Nye onye ọka iwu mpaghara gị na ndị ọrụ ha ike ịbanye ma lee vidiyo ndị dị mkpa
Uru nke Ngwaahịa Tracker EMS
Ma ị bụ onye uweojii na-achọ ihe ngwọta ọhụụ ma ọ bụ onye nduzi IT nke ga-eme ha, njikwa ngwanrọ nke dị mkpa dị mkpa maka ịmepụta kamera ahụ. Na-enweghị software a, ego ị na-etinye na ngwá ọrụ igwefoto dị elu agaghị aba uru. Usoro Nchịkwa Anyị na-egosi na anyị nwere ike ịme ihe ngosi dị iche iche n'ihi na ọ na-enye ohere maka akaebe anụ ahụ na nke dijitalụ nke na-egosi ụdị nkedo niile. Ị ga-enwe ihe ngwọta niile na-eme ka ị nwee ike ịdebe ihe nrịba ama nke aka gị na inwe ike ịbanye na oge ọbụla ịchọrọ ya.
Ebe ọ bụ na nke a bụ nkà na ụzụ ọhụrụ ahụ, ndị na-azụ ahịa nwere ike ịhọrọ site na OMG maka igwefoto vidiyo ha chọrọ. Na teknụzụ niile, ọ nwere ike ịme ngwa ngwa. Ozugbo teknụzụ anaghịzi adị elu, ị ga-etinye ego ka ị nweta ihe igwefoto ọhụrụ na ngwanrọ ọhụrụ iji jikọta ngwá ọrụ ọhụrụ ahụ.
- Bulite na nyocha nke faịlụ dijitalụ niile gụnyere ihe oyiyi, vidiyo, ọdịyo, na faịlụ ọ bụla
- Na na bulite ma na ncha
- Ịnwere ike ịnweta faịlụ dijitalụ niile
- Oghere nke ụlọ maka faịlụ dijitalụ niile
- Achọghị ike ọchụchọ
- Ntụnyeghị nzacha na nzacha ngwa ngwa
- Usoro nhazi
- Foto na akuko ikike obibi akwụkwọ
- Ndi otutu ndi ozo na ndi otu nche
- Apughi ihichapu faịlụ
- Akwụsị ikike nke ike maka ihe gbasara ikperede dị elu ma dị elu
OMG Digital Evidence Management Software [ODEMS] (BWC045) gbanwere ikpeazụ: October 17th, 2019 by admin
Nzuzo 4769 10 Echiche Taa
Igwefoto Worn Isi / Nleba Anya Dijitalụ (BWC008)
BWA012 - Ọdụ Dogbọ Mmiri 10 - Ebe ngosi…